Trano nirehitra teny Ampitatafika : Lehilahy iray no may -
AccueilSongandinaTrano nirehitra teny Ampitatafika : Lehilahy iray no may
03/01/2019 admintriatra Songandina 0
May ny vatan’ny lehilahy iray nanavotra entana. Nanao izay ho afany tamin’ny fanavotana ny afo tsy hihitatra ity lehilahy iray ity, no niharan’ny famaizana, ka may teo amin’ny kibony sy ny tanany. Io no vokatry ny hain-trano niseho teny Ambohikely Ampitatafika, omaly tokony ho tamin’ny 10 ora latsaka fahefany maraina. Trano lehibe iray no levon’ny afo teny an-toerana tao anatin’ny fotoana fohy monja, izao nandratrana olona iray izao. Raha ny loharanom-baovao voaray dia noho ny fifandraisan’ny herinaratra tao amin’ny efitrano iray no nahatonga ny firehetana, ka nidedaka avy hatrany ny trano tao ambany rihana ary nananika ny trano rehetra tany ambony. Tokantranon’olon-tsotra iray ity niharan’ny famaizana ity, ary fantatra fa fahapotehana goavana no vokatr’izao. Nanao izay ho afany ihany ny mponina teny amin’ny manodidina nifarimbona namono ny afo sy namoaka ireo mbola tavela tao an-tokantranony. Vokany tsy nisy azo noraisina fa lasa lavenona avokoa ny ankamaroan’ny entana rehetra tao an-trano fa tsy voavonjy, noho ny fihitaran’ny afo.
Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina rehefa nahazo antso. Nanano sarotra ny famehezana ny afo, efa antsasakadiny taorian’ny firehetana vao voafehy izany. Soa ihany fa tsy nisy aina nafoy nandritra ity loza ity. Noho ny tsy fitandremana matetika no nahatonga ny loza raha toa ka avy amin’ny trano hazo hatrany no mazana nahatonga ny loza. Mampametram-panontaniana ny rehetra ny anton’izany, misokatra ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny firongatry ny hain-trano. Tokony ho mailo hatrany ny rehetra amin’ izao fotoana izao, fa ny loza tsy mampilaza.
Ambatolampy : Notolorana foibe fandanjana fiara
Tamin’ny fomba makotrokotroka sy feno hafaliana no nandraisan’ny vahoaka tsy tambo isaina tao amin’ny distrikan’Ambatolampy, Faritra Vakinankaratra ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly. Notoloran’ny Filoham-pirenena tamin’ny fandalovany tamin’ny mponin’Ambatolampy sy ireo mpampiasa iny Lalam-pirenena fahafito (RN7) ...Tohiny
KMMR sy Legal Team : “Nampandany ny kandidà 13 ny CENI”